कसले हो कानुन र नियम पालना गर्नुपर्ने ?
जन्मघरबाट आफ्नो कर्मघर आएकाहरू तीजमा माइतीको निम्तामा जन्मघर आउँछन् । अरु बेला आफैँ आफ्नो जन्मघर जाने चेली तीजमा चाहिँ नबोलाई या लिन नआई जाँदैनन् ।
तीजमा आएकी छोरीलाई आमाले मिठो परिकार बनाएर खाने कुरालाई दर भनेर खाने चलन छ । जन्मघर आएकी छोरीलाई खुवाउने भन्दा खासै फरक खाने कुरा हँुदैन थियो पहिले । खासगरी दर खाने भनेकै घिउमा चामल भुटेर दूध हालेर पकाई ढकने खाने भनिन्थ्यो । तीजमा खाने भनेको नै ढकने थियो । त्यसैलाई दर भन्ने चलन थियो हिजो ।
आमाले १० महिना गर्भमा बोकेर हुर्काएकी छोरीलाई न्यास्रो लाग्ने अनि घरको काम र खेतीको कामले थाकेकी छोरीलाई केही दिन थकाइ मार्न र न्यास्रो मेट्नलाई माइत ल्याएर दर खुवाउने चलन थियो । दिनभर थकाइ मार्न के गर्ने भन्दा व्रत बसेपछि काम गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यताबाट शुरु भएको चलन पछि आएर कठोर व्रतमा परिणत भएको हो ।
यसको ऐतिहासिक आहानलाई हेर्दा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वती आप्mनो घरबाट साथीहरूसँग खेल्न निस्कँदा उनी शिवले प्राणायम गरेको ठाउँमा पुगिन् । पहिले प्राणायम गरेको हेर्दाहेर्दै पार्वतीलाई शिव मन प¥यो र उनले शिवसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव गरिन् । तर उनका बाबुले यो घर न थरको मानिससँग तिम्रो विवाह हँुदैन भनेपछि पार्वती आफ्ना साथीहरूलाई लिएर शिवले प्राणायम गरेको ठाउँमा गएर बसिन् ।
बाबु हिमालयले त्यहाँबाट जति उठाउने प्रयास गरे पनि उनी नमानेपछि बाध्य भएर शिवसँगै विवाह गरिदिएको पौराणिक मान्यता छ । यसको व्यावहारिक पक्ष भनेको वर्षभर खेतीको काम गरेर थाकेकी चेलीलाई मीठो खान दिएर थकाइ मार्न लगाउनु नै हो । तीजले अब वर्षा सकियो हिउँद लाग्यो भन्ने सन्देश पनि दिन्छ ।
तर तीजको यस्तो एतिहासिकतालाई आजकाल ख्याल गरिँदैन । घरपरिवार बसेर खाने अनि रमाइलो गर्ने भन्दा पनि यो असाध्य खपिनसक्नुको भड्किलो भएको छ । एक महिना अगाडिदेखि पार्टी प्यालेसमा र ठूलाठूला होटलमा मासुका परिकार रक्सीसँग खाने अनि अङ्गे्रजी गीतमा डिस्को नाच नाच्ने चलन छ । त्यस्तै नाच अनि फेसनको प्रदर्शन, गहनाको प्रदर्शन पनि हुने गरेको छ । यसरी तीज मनाउने गर्नाले भ्रष्टाचार मौलाएको पाइन्छ ।
तीजमा ४ जना महिला भेला भएर २० हजारको सारी किनेको अनि ३ तोलाका सुनका गहना लगाएको कुरा गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो छिमेकी मालपोतमा काम गर्छन् । उसको दिनमै १५/२० हजारका दरले भाग पर्छ अरे । गर्दा पनि कस्तोकस्तो गर्दा रहेछन् त । बाटो भएको जग्गा पास गर्न जान्छन् । बाटो भएको बराबरी राजस्व लियो अनि बाटो नभएको भनेर पास ग¥यो । १ लाख राजस्व लाग्नेमा २५ हजारको रसिद काट्यो । जग्गावालालाई २५ हजार जोडिदियो मख्ख परिहाल्छन् भन्थी ।’
यसरी पैसा कमाउँछन् ।
अर्कीको भनाइ यस्तो हुन्छ, ‘मेरा पनि भन्सारमा छन् । त्यसैले मलाई यसपाली अख्तियारले समाइहाल्यो भने पनि सुन किनेपछि तिमीले माइतबाट ल्याएको भन्ने भनेर ६ तोला सुन किने तीजमा ।’
‘के गर्नु मेरालाई मालपोत कि भन्सारमा जाऊ न भनेको टेर्दैनन् । मेरो छिमेकीले भन्सार गएको ६ महिनामा ६ वटा घडेरी जोडिसक्यो । मैले तिमीहरूलाई अख्तियारले समाउँदैन भनेको उसको पनि ता मुख छ नि भन्थी मलाई । कस्तो फूर्ति छ उसको आजकाल । हाम्रा देशका कर्मचारीका परिवारको यस्ता संवाद हुन्छन् ।
यी माथिका कर्मचारी महिलामा पनि त्यस्तै ठुलो फूर्ति हुन्छ । कालोबजारी तस्करी गर्नेहरूको परिवारले पाँचतारे होटलमा लाखौं खर्च गरेर तीज मनाउँछन्, त्यस्तै उद्योगीहरूको पनि । अनि हाम्रा किसान महिलाहरूले पनि उनीहरूकै दाँजोमा दगुर्ने चेष्टा गर्न थालेका छन् । यसले हामी र हाम्रो समाजलाई कहाँ पु¥याउँछ । जहाँ कपडाको प्रदर्शन हुन्छ, जहाँ गहनाको प्रदर्शन हुन्छ त्यो ठाउँमा हाम्रा गाउँले महिला जान खोज्नु भनेको आफैँले आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउनु हो ।
केही वर्षदेखि यता राजनीतिक दलका सङ्गठनहरूले पनि तीज मनाउने गर्छन् । यसपाली पनि त्यो क्रम जारी रह्यो । यसपालि मसँग पनि अखिल नेपाल महिला सङ्घकी नेता पैसा माग्न आइन् । उनलाई मैले एउटा शर्तसहित सहयोग गरेँ । शर्त थियो, ‘यसपालि तीज मान्दा सडकमा नमान्नु होला । त्यो सडक न व्यापार गर्ने ठाउँ हो, न सभा गर्ने, न तपाईंहरूले तीज मान्ने ठाउँ हो । त्यहाँ सवारी साधनले बेरोकटोक दगुर्न पाउनुपर्छ । तपाईंहरूलाई थाहा छ । अहिले नगरपालिकामा सबै राजनीतिक दल मिलेर हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको छ । सडकमा कार्यक्रम हुँदा त्यहाँको भीडमा न चालकले हर्न बजाउन पाउँछ न सहभागीले सवारी साधनलाई बाटो नै छोडिदिन्छन् । त्यही ठाउँमा दुर्घटना भइहाल्यो भने तीज मनाउन भेला भएकाले उल्टै त्यो चालकलाई पिट्ने र गाडी जलाउने सम्मका काम हुन्छन् । यस्तो काम रोक्नु तपाईंहरूको कर्तव्य हो । हामीले नगर सफा राख्नुपर्छ ।’
मैले इटहरीका मेयरलाई पनि सडकमा कार्यक्रम गर्न नदिनुहोला भनी सचेत गराएको थिएँ ।
एक दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ पार्टीका महिला नेताहरू भएकै ठाउँमा मैले यसपालिदेखि सडकमा तीज मनाउन बन्द गर्नुहोस् भनँे । त्यस्तै, हामी ४ जना हिमाल सुवेदी, शिव डाँगी, रामप्रसाद र मैले नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत भन्यौँ । मैले यी सबै ठाउँमा आफ्नो कुरा भनिरहँदा कतै पनि मेरो निजी स्वार्थ थिएन । म यो राज्यको एउटा नागरिकको हैसियतले यो सडकमा गरिने कार्यक्रमले ठूलै दुर्घटना भएको देखेको छु । अनि एउटा चालक त्यसको दोषी हुनुपर्छ । सडकमा कार्यक्रम गर्नेहरूले त्यही चालकलाई दोषी ठान्नेछन् । त्यसको क्षतिपूर्ति व्यवसायीले तिर्नुपर्छ । चालक जेल जानुपर्छ । हाम्रो १ दिनको स्वार्थका लागि कानुन हातमा लिएर कानुनविपरीत सिन्को पनि भाँच्नु हँुदैन भन्ने हो । तर मैले भनेको कुराले उनीहरूलाई छोएन । छुने कुरा पनि थिएन । किनभने सत्ताको अहङ्कार थियो । यति बेला हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेकोे छ । अब हामीले सडकमा कार्यक्रम गर्दा कसले रोक्ने ? नगरपालिकाका कर्मचारीले र नगरपालिकाले ता त्यहाँ शोभा बढाइदिन जानुप¥यो । अनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले बोल्ने कुरै भएन । हामीजस्ता बबुरा नागरिक सत्ता अगाडि टाउको निहुराएर गैर कानुनी काम हेरेर बस्नु भन्दा अरु हुने कुरै भएन ।
सडकको किनारमा १० केजी नासपाती राखेर बसेकी एउटी चेली, ५ मुठा साग राखेर सडक किनारमा बसेकी दिदी, अनि अलिकति स्याउ राखेर बसेको एउटा किसान उसलाई नगर प्रहरी आएर सबै उठाएर नगरपालिका लान्छ । उनीहरूलाई कसैले त्यसो नगर भन्न सक्दैन । साँच्चै त्यो व्यापार गर्ने थलो होइन । उनीहरूले त्यहाँ व्यापार गर्नु पनि हँुदैन । तर त्यो तीजको कार्यक्रममा जो प्रमुख अतिथि छ जो नगरपालिकाको कानुन बनाउने ठाउँमा छ । उपमेयर पद भनेको न्यायिक समितिको प्रमुख पनि हो । उपमेयरले उनीहरूलाई कानुन मान्न बाध्य बनाउने हो । कसैले कानुन नमाने, दण्ड दिने र मान्न लगाउने हो । सडकमा भिखारीलाई पनि प्रवेश दिनुहुँदैन । काम गर्न सक्ने भए उसलाई समुदायमा पठाउनुपर्छ । तर सडकलाई पूर्ण रूपमा खाली गर्नुपर्ने हो र अब नगरपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो । सरकारको काम पहिलो आफूले नियम र कानुनमा बस्नुपर्छ अनि अरुलाई राख्नुपर्छ । तर यहाँ जसले नियम र कानुन बनाउँछ । उसैले नियम र कानुन मिचेर आफैँले नियम विपरीत काम गरेपछि । अरुलाई नियम पालना गराउँछु भन्दा मतिर नै मानिसले औँला ठड्याउँछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्दैन ?
नियम मिच्नेहरू जनप्रतिनिधि र आफूलाई ठूलो मानिस भन्नेहरू नै छन् । १ दिन १ जना जनप्रतिनिधिले बिनाहेलमेट मोटरसाइकल चलाएछन् । उनलाई प्रहरीले मोटरसाइकल रोकेर चाबी खोस्यो । उनले प्रहरीलाई धम्क्याएर भने, ‘मलाई चिनेको छस् ? म तेरो जागिर खाइदिऊँ ?’ बिचरा प्रहरी छक्क प¥यो । के जनप्रतिनिधि मन्त्री, मेयर, उपमेयर र चाहिँ देशको कानुन मानेनन् ।
पहिले राजतन्त्रले यस्तै ज्यादती गरेकै कारण र कानुन नमानेका कारण त्यो राजतन्त्रलाई निरङ्कुश भनियो र त्यसलाई हामीले जरैबाट उखेलेर फाल्यौँ । तर अहिले पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिले नियम कानुन नमान्ने अनि सर्वसाधारण जनतालाई मात्र नियम कानुन लाग्ने गरी नियम बनाउँदैछन् । नेतालाई नियम कानुन नलाग्ने हो भने हामीलाई भनिदिनुप¥यो कानुन तिमीहरूले मान हामीलाई कानुन लाग्दैन भनेर । हिजो एउटा राजतन्त्र थियो कानुन नमान्ने आज हजारौं भएछन् कानुन मान्ने भनेर बुभ्mनुपर्ने भयो ।